Maitiro ekudzokorora kunyorera pa iPhone ne iPad ne iOS 13 | IPhone nhau
iOS 13 yave kuwanikwa kune vese vashandisi vane iyo iPhone 6s kana yepamusoro. Neshanduro yega yega yeIOS, iyo Cupertino kambani kazhinji gadzirisa nzvimbo yemamwe mabasa inowanikwa mushanduro dzakapfuura. Mumwe wavo, tinoiwana mune mukana wekukwanisa kumutsidzira izvo zvinoshandiswa.
Ne iOS 12 neshanduro dzakapfuura, kuitira kuti tivandudze uye / kana kutarisa kana vhezheni nyowani kana kuvandudzwa kwemaapplication atakaisa pane yedu kifaa akawanikwa muApp Store. vhura iyo application uye tinya pane Zvidzoreso. Na iOS 13, iyo tebhu yanyangarika, nekudaro ichichinja nzira yekuzviita.
Chikonzero chega Apple yaifanirwa kunge yakashandura nzira maapplication ekuvandudza ndeyekuti iwe unoda kuti zvigadziriswe zvepurogiramu zvive otomatiki, uye kuti isu hatisi ivo vashandisi vanofanirwa kumanikidzwa kuigadziridza, kunyanya kune avo vasingade kumutsiridza maapplication avo otomatiki, basa raive ratovepo.
1 Gadziridza maapplication muIOS 13
1.1 1 nzira
1.2 2 nzira
Gadziridza maapplication muIOS 13
Kutanga, tinotungamira kune iyo App Store
Tevere, tinya pane iyo avatar inoratidza yedu apple account, iri mukona yepamusoro yekurudyi.
Just pazasi Tsika Kurudziro, nhamba yezvikumbiro yakamirira kugadzirisa inoratidzwa, pamwechete nebhatani Rongedza zvose. Kana isu takagadzirisa iyo terminal kuti iyo yekuvandudza ive otomatiki, chishandiso chichavagadzirisa ivo kana ichirodha.
Tinobatirira pasi icon Chitoro Chemagetsi.
Kubva pane dzakasiyana sarudzo idzo mamiriro ezvinhu anotitaridza, tinosarudza Zveshuwa.
Ipapo iro iro hwindo rinoratidzwa senge mune yakapfuura nzira, saka isu tinongofanirwa kubaya Rongedza zvose, kuitira kuti zvinyorwa zvekushandisa zviiswe pane yedu kifaa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Maitiro ekuvandudza maapps pa iPhone ne iPad neIOS 13
Ini ndanga ndisingazive wechipiri nzira, ndinofunga ndichafanirwa kuyedza yega yega icon kuti ndione izvo zvitsva maficha "zvakavanzwa" zvirinani muSEI yemamiriro ezvinhu imenyu nyowani.
Pindura kune izvi
Aya ndiwo mashandisiro anoita iyo iPhone nyowani 11 kutsungirira kudonha [Vhidhiyo]